Accueil > Gazetin'ny nosy > Angovo atomika : Ilaina koa amin’ny fampandrosoana ara-toekarena
Angovo atomika : Ilaina koa amin’ny fampandrosoana ara-toekarena
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny Ivon-toeram-pirenena momba ny fikarohana amin’ny siansa nokleary na “INSTN” omaly alatsinainy ny “Andron’ny nokleary”. Ny faha-29 novambra no hifarana izany. “Fanamafisana ny fahaiza-manao amin’ny fikirakirana sy fampiasana ny fikarohan’ny Malagasy”, no lohahevitra ifotoran’izany.
Miara-miombona antoka amin’ny fikarakarana izao “Andron’ny nokleary” izao ny ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa sy ny Ivon-toeram-pirenena momba ny siansa sy teknika nokleary (INSTN- Madagasikara)
Mpianatra maro avy amin’ny andian’ireo nahazo ny mari-pahaizana “licence” sy “Master” no nivoaka tao amin’ity sampam-pianarana momba ny nokleary ity. Porofon’ny kalitaon’ny fampianarana ambony izany, satria dia tena mamirapiratra any amin’ny sehatra misy azy amin’ny andraikitra sy asa sahaniny ireo nandranto fianarana sy fahaizana tao amin’ity Ivon-toerana ity.
Tanjona mandritra ity “Andron’ny Nokleary” ity ny hampahafantatra bebe kokoa ny momba ny teknika sy siansa nokleary ary mba hanatsarana ny fiantraikany ara-toekarena sy sosialy eto amin’ny tany sy ny firenena ny voka-pikarohana momba izany.
Mampiavaka ny tamin’ity taona ity ny fiaraha-miasa amin’ireo manam-pahaizana avy ao amin’ny “AIEA” izay efa manampy hatrany na amin’ny fampitaovana na amin’ny fanofanana ireo mpampianatra.
Nanolotra fitaovana raitra sy avolenta mitentina 600 000 Euros hanatsarana ny fikarohana ireo avy amin’ny “AIEA” na ny “Rafitra Iraisam-pirenena momba ny angovo atomika” (Agence Internationale de l’Energie Atomique) mba hanatrarana ny tanjona, dia ny hoe “fikarohana ara-tsiansa miantoka ny fampandrosoana ny firenena”.
Nivoitra, ohatra omaly, fa tsy ny momba ny baomba ihany no ampiasana ny akora nokleary. Azo ampiharina tsara amin’ny fiainana andavanandro ny teknika sy siansa nokleary na eo amin’ny lafiny fambolena toy ny fampiasana ny masom-boly hiadiana amin’ny bibikely mihinana ny vary, ny lafiny harena ankibon’ny tany, ny fitsaboana ny homamiadana sy ny fijerena akaiky ny momba ny rano sy ny hafa.